Turkiga oo joojiyey dhaqaalihii uu sida tooska ah u siin jiray dowladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Turkiga ayaa joojisay dhaqaale ay si toos ah u siin jirtay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, sida ay qortay wakalaadda wararka Reuters.
Sarkaal ka tirsan Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa Wakaaladda Reuters u sheegay in lacagaha la siin jiray Dowladda ay joogsadeen dhamaadkii sanadkii 2013.
Dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya siin jirtay dhaqaale toos ah, kaasoo badankiisa lagu bixin jirey gargaarka bini aadamtinimada iyo weliba mashaariicda dhanka horumarinta la xiriira.
Sarkaalkan oo la weydiiyey inay jiraan wada-hadallo u socda labada dhinac oo ku aaddan sidii sanadkan 2014 dib loogu bilaabi lahaa dhaqaalihii Turkiga sida tooska ah u siin jirey Soomaaliya iyo in kale, ayaa sheegay in arrintaasi xilligan aysan ku talagal aheyn, qorshahana ugu jirin.
Wuxuu sarkaalkaani intaas raaciyey in talaabadan aysan la xiriirin eedeymo musukh-maasuq ah oo loo soo jeediyey dowladda Soomaaliya ee uu madaxda ka yahay Xassan Sheikh Maxamuud.
Sarkaal aan magaciisa la sheegin oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in Turkigu joojiyay dhaqaalihii sida tooka uu u siin jiray dowladda Soomaaliya, wuxuuse rajo ka muujiyey in dib loo bilaabi doono.
Lama oga inta ay la ekeyd lacagta dowladda Turkigu bil kasta siin jirtay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, hase ahaatee gudoomiyihii hore Bankiga dhexe Abdisalaam Cumar Hadliye ayaa sheegay in 7-dii biulood ee uu xilka hayey Turkiga Soomaaliya bil kasta siinayey lacag kaash ah oo dhan $4.5 milyan doolarka Maraykanka oo lagu shubi jiray Bankiga dhexe.
Mas’uul ka tirsan hay’adda dalka Turkiga u qaabilsan gargaarka dibadda ee magaceeda loosoo gaabiya (TIKA), ayaa sheegay in arrintani aysan saameyn ku yeelan doonin howlihii samafalka ahaa ee ay hay’addaasi gudaha Soomaaliya ka waddey.
Dalka Turkiga ayaa usoo gurmaday Soomaaliya sanadkii 2011, xilligaas oo abaar xoogani ku dhufatay qeyb ka mid ah dalka, waxeyna xilligaas kadib taageerayeen dowladda Soomaaliya iyo shacabka.
R/wasaare Cabdi Weli iyo shan ka mid ah Golaha Wasiirrada oo booqasho ku jooga Itoobiya